Dilal Kala Duwan Oo Ka Dhacay Hargeysa iyo Ceergaabo | Araweelo News Network (Archive) -
Hargeysa(ANN)Haweenay ka mid ahayd dumarka bacadyaalka ah ee ka ganacsada suuqa ayaa caawa lagu dilay afaafka hore ee Saldhiga Dhexe ee magaalada Hargeysa meel dhawr talaabo u jirta. kadib markii haweenaydaa oo ahayd dumarka Jaadka ka ganacsada
magaceeduna yahay Ardo Muumin uu tooray la dhacay nin dadka birta ka shaqaysta ee tumaalaha ah.
Dhaawaca haweenaydaa oo culus ayaa loola cararay Cisbitaalka guud ee magaalada Hargeysa, halkaas oo lagu dawaynayo. sida ay sheegeen hawlwadeenada cusbitaalku, iyadoo dhaawaceedu yahay mid khatar ah.
Ninka dilkaa geystay ayaa sida ay wararku sheegayaan saldhiga iskii isu geeyay, isagoo ka dalbaday booliska inay xidhaan.
lama garanayo sababta uu ninkaasi ugu dhaqaaqay falkaa dilka ah ee uu ku fuliyay haweenaydaa iyo waxa ka dhexeeyay, balse ciidanka baadhista denbiyada ee Booliska, ayaa ganacta ku haya falkaa, iyagoo baadhaya sababta ka danbaysa.
Dhinaca kale Nin dhalinayaro ah ayaa caawa lagu dilay badhtamaha magaalada Ceergaabo ee xarunta gobolka Sanaag. Marxuumka la dilay oo magiciisa lagu sheegay Bashiir Jaamac, waxa ay wararku sheegayaan inuu tacshiirad rasaas ah ku furay nin askari ah oo ka tirsan ciidanka boolisku, kaas oo markii uu falkaan geystay baxsaday.
Booliska ayaa sheegay inay magaalada ka baadhayaan ninkii dilka geystay, waxayna arrintaasi magaalada ka abuurtay cabsi iyo dareen xaasaasi ah.